ယုန် - ဝီကီပီးဒီးယား
(အင်္ဂလိပ်: Rabbits and Hares)
ဥရောပ ယုန် (Oryctolagus cuniculus)
အာတိတ် ယုန် (Lepus arcticus)
ယုန်ကို သာမန်အားဖြင့်သာ သိသူများသည်။ တစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုးကို ခွဲခြား၍ သိသူကား နည်းသည်။ အမှန်မှာ ယုန် (၂)မျိုးရှိရာ တစ်မျိုးမှာ ကွင်းယုန် (အင်္ဂလိပ်: Hare) ဖြစ်၍ ကျန်တစ်မျိုးမှာ တွင်းယုန် (အင်္ဂလိပ်: Rabbit) ဖြစ်သည်။ ပါဏဗေဒအလိုအရ ကွင်းယုန် နှင့် တွင်းယုန် နှစ်မျိုးစလုံးသည် လက်ပိုရီဒီး (Leporidae) မျိုးရင်းဝင်များဖြစ်ကြပြီး လက်ဂိုမော်ဖား (Lagomorpha) မျိုးစဉ်အောက်၌ ပါဝင်ကြလေသည်။
ကွင်းယုန်သည် ယင်း၏ အမွှေးထူခြင်း၊ နားရွက်ရှည်ခြင်းနှင့် လျင်မြန်ခြင်းတို့ကြောင့် လူသိများသည်။ အမှန်မှာ ကွင်းယုန်သည် အလျင်မြန်ဆုံး တိရစ္ဆာန်ငယ်များတွင် ပါဝင်လေသည်။ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် တွေ့ကြုံလျှင် ကွင်းယုန်သည် ယင်း၏ လျင်မြန်ခြင်းကိုသာ အားကိုးလေသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ကွင်းယုန်သည် ရန်သူများ၏ဘေးမှ လွတ်ကင်းနိုင်လေသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကွင်းယုန်များကို တွင်းယုန်များအဖြစ် ပြောဆိုနေခြင်းသည် စင်စစ်အားဖြင့် မှားလေသည်။ ကွင်းယုန်ကို ကမ္ဘာအနှံ့အပြား၌လိုလိုပင် တွေ့နိုင်သော်လည်း တွင်းယုန်ကိုမူ ဥရောပတိုက်တွင်သာ စ၍ တွေ့ရသည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် တွင်းယုန်များကို အခြားတိုင်းပြည်များသို့ သယ်ဆောင်သွားကြလေသည်။ တွင်းယုန်သည် ကွင်းယုန်ထက် ကိုယ်ထည်သေးသည့်အပြင် ခြေထောက်များနှင့် နားရွက်များသည်လည်း ကွင်းယုန်လောက်မရှည်ကြချေ။ ကွင်းယုန်သည် မြေပြင်ပေါ်၌ နေထိုင်သော်လည်း တွင်းယုန်ကမူ မြေတွင် တွင်းများတူး၍ နေထိုင်လေသည်။ တွင်းယုန်သည် ကွင်းယုန်ကဲ့သို့ ပြေးရာတွင် မမြန်ချေ။ ထိုသို့ ဖြစ်ရသည်မှာ ရန်သူများဘေးမှ လွတ်ကင်းစေရန် ဝေးဝေးမပြေးရဘဲ၊ ယင်းတို့နေထိုင်ရာ တွင်းများအထိသာ ပြေးရန်လိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ထို့ပြင် တွင်းယုန်သည် မွေးဖွားရာ၌ ကွင်းယုန်ကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ မျက်စိမမြင်ဘဲနှင့် အမွှေး လုံးဝနီးပါးမရှိဘဲ မွေးဖွားသည်။
ကွင်းယုန်များသည် ၁၇ လက်မမှ ၂၅ လက်မအထိ ရှည်တတ်သည်၊ အမြီးသည် တို၍ အမွှေးများပြီးလျှင် အပေါ်သို့ ထောင်လျက်ရှိသည်။ ကွင်းယုန်သည် မြေပြင်တွင် ခုန်လွှား၍ ပြေးသွားသောအခါတွင် ယင်း၏ ဖြူဖွေးသောအမြီးအောက်ပိုင်းကို ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ပေသည်။ နားရွက်များကို ထောင်လိုက်သောအခါတွင် အမည်းအမှတ်အသားများကို မြင်ရသည်။ ကွင်းယုန်တစ်ကောင် မြေကြီးပေါ်၌ ရပ်နေသောအခါတွင် ယင်း၏အရောင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရောင်တို့သည် တူလှသဖြင့် ကွင်းယုန်ကို မြင်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းသည်။ ကွင်းယုန်၏ အသက်ရှူမှုနှင့်ပါးမုန်းမွှေးများ၏ လှုပ်ရှားနေမှုကြောင့်သာ ကွင်းယုန်ရှိနေကြောင်း သိနိုင်လေသည်။
ကွင်းယုန်၏ အပေါ်နှုတ်ခမ်းသည် ကွဲနေ၏။ နှာခေါင်းနှင့် နှုတ်ခမ်းတို့သည်လည်း အစဉ်လှုပ်ရှားနေသည်ဟု ထင်ရလေသည်။ အထူးသဖြင့် ကွင်းယုန်ကလေးများတွင် ထိုသို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ရှေ့ခြေထောက်တွင် ခြေချောင်းကလေးများ ငါးချောင်းစီရှိ၍ နောက်ခြေထောက်များတွင်မူ လေးချောင်းစီသာရှိသည်။ ကွင်းယုန်သည် မလွှဲသာ၍ ရန်သူကို ခုခံရလျှင် ယင်း၏နောက်ခြေများနှင့် ရန်သူကို နာကျင်အောင် ကန်ကျောက်နိုင်လေသည်။ ကွင်းယုန်သည် ယင်း၏နောက်ခြေများကြောင့် အတော်အလှမ်းကျယ်စွာ ခုန်လွှားနိုင်သည်။ ယင်း၏ ရှေ့ခြေထောက်များကို ရှဉ့်များကဲ့သို့ အစာစားရာတွင် အသုံးမပြုနိုင်ချေ။ ကွင်းယုန်နှင့် တွင်းယုန်နှစ်မျိုးစလုံးသည် ကြောက်တတ်သော်လည်း မလွှဲသာ၍ သားငယ်ကလေးများအတွက် ခုခံရန် လိုသောအခါတွင် ရဲရင့်စွာ ခုခံတတ်ကြသည်။ ခုခံရာတွင် ယင်းတို့၏ သန်မာသော နောက်ခြေထောက်များကို အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ခါက မြွေပါမြီးတို တစ်ကောင်နှင့် မြွေတစ်ကောင်အား သတ်ထားသည်ကို တွေ့ရဖူးသည်။ အိမ်တွင် မွေးမြူထားသည့် တွင်းယုန်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကြောင်များနှင့် သင့်မြတ်အောင် နေထိုင်လေ့ရှိကြသော်လည်း မလွှဲသာ၍ မသင့်မမြတ် ဖြစ်ကြသောအခါတွင် နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်လေ့ ရှိကြသည်။ ရန်သူ၏ဘေးမှ တိမ်းရှောင်ကြရာတွင် လွန်စွာပါးနပ်ကြသည်။ လေ့လာသူအချို့ကမူ ရန်သူကို တိမ်းရှောင်ကြရာ၌ ယုန်များသည် မြေခွေးတို့ကဲ့သို့ပင် ပါးနပ်ကြသည်ဟု ဆိုလေသည်။ ရန်သူက ယုန်ကို လိုက်သောအခါတွင် ယုန်သည် အားကုန်ပြေးပြီးလျှင် ရုပ်တရက် ရပ်လိုက်တတ်သည်။ ထိုသို့ ရပ်လိုက်ပြီးလျှင် အခြားတစ်ဖက်သို့ အလွန်လျင်မြန်စွာ ထွက်ပြေးသွားတတ်လေသည်။
ကွင်းယုန်များသည် မကြာခဏ သားဖွားတတ်ကြသဖြင့် အပွားမြန်သည်။ ခြောက်လအရွယ်သို့ ရောက်လျှင် မိတ်လိုက်နိုင်သည်။ တစ်နှစ်တွင် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် သားမွေးနိုင်သည်။ မိခင်သည် ကိုယ်ဝန်ကို တစ်လသာ လွယ်သည်။ တစ်ကြိမ်မွေးလျှင် ယုန်ကလေး နှစ်ကောင်မှ ငါးကောင်အထိ မွေးတတ်သည်။ တစ်လ၊ သို့မဟုတ် နှစ်လကြာအပြီးတွင် ယုန်ကလေးများသည် ဘာသာဘာဝ နေထိုင်စားသောက်ကြသည်။ အချို့နေရာများတွင် ကွင်းယုန်တို့၏ သဘာဝရန်သူများဖြစ်သော မြေခွေး၊ မြွေပါမြီးတို၊ လင်းယုန်၊ သိမ်းနှင့် ခွေးတူဝက်တူများကို လူများက ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးကြသဖြင့် ကွင်းယုန်များသည် အတိုးပွား မြန်လာပြီးလျှင် စိုက်ခင်းများကိုပင် ဖျက်ဆီးပစ်ကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် အချို့နေရာများတွင် စိုက်ခင်းများ အတွင်းသို့ ကွင်းယုန်များ မဝင်နိုင်အောင် ခြံများကိုပင် ကာထားကြရလေသည်။ ဩစတြေလီးယားတိုက်ကဲ့သို့သော ကွင်းယုန်၏ အနှောင့်အယှက်ကို ခံကြရသည့် နေရာများတွင်မူ ကွင်းယုန်များကို ကျော့ကွင်းများ၊ ခွေးများနှင့် သေနတ်များ အသုံးပြုကာ ကာကွယ်ပေးကြရသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရုံမျှနှင့် မရသေးလျှင် အချိန်မှန်မှန် ခရိုင်တစ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ယောက်ျားကြီးငယ်များနှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိန်းမကြီးငယ်များသည် ကွင်းယုန်များ နေထိုင်သော နေရာများကို စတုရန်းတစ်မိုင်ခန့် တိုင်း၍ ကွင်းယုန်များကို ဝင်းခြံတစ်ခု အတွင်းသို့ မောင်းသွင်းပြီးလျှင် တုတ်ကြီးများဖြင့် ရိုက်သတ်ကြရလေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခါမျိုးတွင် တစ်နေ့တည်း၌ပင် ကွင်းယုန်ပေါင်း ၂ဝဝဝဝ ခန့်ကို ရိုက်သတ်နိုင်ကြလေသည်။ ကွင်းယုန်သားသည် ခပ်ထပ်ထပ်ဖြစ်သော်လည်း ထူးခြားသည့် အနံ့ရှိသဖြင့် လူကြိုက်များသည်။ ယုန်၏ အမွှေးများကို အထူးသဖြင့် ဆောင်းရာသီ၌ အရောင်ပြောင်းသည့် အမွှေးများကို အဖိုးတန်သည့် သားမွှေးတုအနေဖြင့် အသုံးများသည်။ တွင်းယုန်တွင် အရိုင်းနှင့် အယဉ်ဟု နှစ်မျိုးရှိသည်။
တွင်းယုန်တွင် သားမွှေးများ ရှိသည့်ပြင် နားရွက်ရှည်များလည်း ရှိသည်။ ကွင်းယုန်လောက် မလျင်မြန်သော်လည်း လျင်မြန်စွာကား ပြေးနိုင်လေသည်။ လူ့အတွက် ကွင်းယုန်နှင့် တွင်းယုန်များက အဝတ်နှင့် အစာကို ဖြည့်တင်းပေးကြသည်။ အိမ်၌ မွေးထားလေ့ရှိသော တွင်းယုန်များသည် လူ၏ ချစ်စနိုး တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်ကြလေသည်။ မြောက်အမေရိကတိုက်တွင် ကွင်းယုန်နှင့် တွင်းယုန်အတော်များများ နေထိုင်ကြလေသည်။ ဘီစီ ၅၅၁ မှ ၄၇၈ ခုနှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၌ ထင်ရှားခဲ့သော ကွန်ဖူးဇီးခေတ်တွင် တွင်းယုန်များကို အယူဝါဒဆိုင်ရာ ပွဲလမ်းများတွင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ရှေးခေတ် သဘာဝပညာရှင်များက တွင်းယုန် အကြောင်းကို ရေးကြရာ၌ ကွင်းယုန်နှင့် တွင်းယုန်ကိုပါ ရောနှော၍ ရေးသားခဲ့ကြသဖြင့် ယခုအခါတွင် အချို့တွင်းယုန်များကို ကွင်းယုန်များဟု ခေါ်နေကြလေသည်။ တွင်းယုန်စစ်စစ်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိမိကိုယ်တိုင်တူးထားသည့်တွင်းများအတွင်း၌ သားများကို မွေးဖွားလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ ခွေးတူဝက်တူ၊ သို့မဟုတ် အခြားမြေတွင်းနေတိရစ္ဆာန်တို့၏ တွင်းများတွင် မွေးဖွားလေ့ရှိသည်။ မွေးစတွင် တွင်းယုန်ကလေးများသည် မျက်စိမှိတ်ထားကြပြီးလျှင် ယင်းတို့၌ အမွှေးများ မရှိကြချေ။ ဤအချက်တွင် ကွင်းယုန်နှင့် ခြားနားသည်။ ကွင်းယုန်သည် သားကို တွင်းထဲ၌ မမွေးချေ။ ထို့ပြင် မွေးစကွင်းယုန်ကလေးများ၏ မျက်စိများသည် ပွင့်လျက်ရှိကြသည့်ပြင် အမွှေးများလည်း ပါကြသည်။ တွင်းယုန်များသည် နေ့အချိန်တွင် အစာရှာထွက်လေ့ မရှိသော်လည်း ယင်းတို့ကို မကြာခဏ နေ့အချိန်၌ တွေ့ရတတ်သည်။ ယင်းတို့သည် ညဉ့်အချိန်တွင်သာ ထွက်၍ အစာကို ရှာစားလေ့ ရှိကြသည်။ တွင်းယုန်များသည် တစ်ကြိမ်လျှင် နှစ်ကောင်မှ ခြောက်ကောင်အထိ မွေးဖွားတတ်၍ တစ်နှစ်အတွင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ မွေးဖွားတတ်သည်။
တွင်းယုန်များတွင် ရောဂါကျရောက်တတ်ပြီးလျှင် ယင်းတို့ မှတစ်ဆင့် လူများကို ကူးစက်စေတတ်သည်။ ထိုသို့ကူးစက်ရာတွင် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ၊ သို့မဟုတ် လပေါင်းအတော်ကြာသည်အထိ ခံရတတ်သည်။ ထိုရောဂါ ရောက်လာလျှင် လူတစ်ရာလျှင် သုံးယောက်မှ ငါးယောက်အထိ သေတတ်သည်။ မုဆိုးများ တောလိုက်ရာတွင် တွင်းယုန်ရိုင်းများကိုလည်း လိုက်လံဖမ်းဆီးလေ့ရှိကြသည်။ ထိုအခါတွင် ခွေးများကိုအသုံးပြုကြသည်။ အမေရိကန် တိုင်းရင်းသားများသည်လည်း ရှေးအခါကပင် တွင်းယုန်များကို ဖမ်းဆီးလေ့ရှိကြသည်။ ထိုသို့ တိုင်းရင်းသားများက ဖမ်းဆီးကြရာတွင် တွင်းယုန် အမြောက်အမြားရှိသော နေရာတစ်ဝိုက်တွင် လူအမြောက်အမြားက အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ဗွီပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် ဝိုင်းထားပြီးလျှင် လူများသည် တဖြည်းဖြည်း မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်သို့ ရွေ့လာကြကာ တွင်းယုန်များ၏ နေရာကိုကျဉ်းမြောင်းသွားစေပြီးလျှင် နောက်ဆုံးတွင် တုတ်ကြီးများဖြင့် ရိုက်သတ်ကြလေသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း ရှိရင်းစွဲတွင်းယုန်များ၏ အမွှေးများသည် နူးညံ့၍ သေးပြီးလျှင် အညိုရောင်လိုလိုသာ ရှိသည်။ အချို့တွင်းယုန်များ၏ အမွှေးများသည် ဆောင်းအခါ၌ ပတ်ဝန်းကျင်အရောင်နှင့် လိုက်လျောစေရန် အဖြူရောင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းသွားတတ်သည်။ ထိုအခါတွင် ယင်းတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြင်နိုင်ခဲသည်။ တွင်းယုန်၏ အမွှေးများကို အထည်များ၏ အနားကွပ်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဦးထုပ်ပြုလုပ်ရန် သက္ကလပ်ကြမ်းအဖြစ် ပြုလုပ်ရာတွင်ဖြစ်စေ အသုံးပြုကြသည်။ အမွှေးချွတ်ပြီးသောတွင်းယုန်များကို ကော်များ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုကြလေသည်။
တွင်းယုန်များကို မွေးမြူရာတွင် အစာကို ဂရုစိုက်၍ ကျွေးမွေးရန် လိုအပ်ပေသည်။ ရေကောင်းရေသန့် များများနှင့် ဆားအနည်းငယ်ကိုပါ နေ့စဉ် ကျွေးသင့်သည်။ ယင်းတို့ကိုထားရာ အိမ်များကို မွေးမြူသည့် တိုင်းပြည်၏ ရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီစွာ ဆောက်လုပ်ရန် လိုပေသည်။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း လည်း ထားရမည်။ နေ့စဉ် ယုန်များ၏ နေရာများကို ရှင်းလင်းပေးပြီးလျှင် ကောက်ရိုး၊ သို့မဟုတ် သစ်ရွက်များကို အသစ်လဲပေးသင့်သည်။ ထို့ပြင် လေကောင်းလေသန့်နှင့် နေရောင်ကိုလည်း ရရှိစေရန် ဖန်တီးပေးရမည်။ သို့မဟုတ်လျှင် တွင်းယုန်များတွင် ရောဂါကျရောက်တတ်လေသည်။
လယုန်ဒဏ္ဍာရီသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ စတင်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဟန်ပြည်နယ်ကာလမှ ရှေးကဗျာဖြစ်သော Chu Ci အရ လပေါ်တွင် ယုန် (hare) ရှိသည်ဟု မှတ်ချက်ချသည်။
↑ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M., eds. (၂၀၀၅)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 194–211။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း (၁၉၆၉)။ "ယုန်"။ in မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း စာတည်းအဖွဲ့ (ed.)။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း။ ၁၁ (ပဌမအကြိမ် ed.)။ စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်မြို့။: စာပေဗိမာန်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယုန်&oldid=743654" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ မေ ၂၀၂၂၊ ၂၁:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။